CONELE gaari bamka la taaban karo - Shiinaha Qingdao CONELE Group
gaari bamka la taaban karo CONELE waxaa soo saaray Qingdao CONELE Group Co., Ltd., iyadoo la isticmaalayo khibrad sare ee guriga iyo dibadda iyo casriga sare technology jilidda computer si nidaamsan u falanqeeyaan ka stress iyo barakaca ah ee qaab-dhismeedka gaariga bamka. Saamaynta ay ku koobin kala duwan sida inta jeer ee dabiiciga ah ee nolosha daalka ah kororka dhismaha la wada hadleen. Isla mar ahaantaana, nidaamka Haydarooliga waxaa filaayo iyo technology dheecaan free cusub loo qaatay si aad loogu yareeyo saamaynta commutation bamka ku kaca ah. Waxaan leenahay dhawr shatiyada in ayna ka mid ah qaab-dhismeedka kaca iyo design ee nidaamka Haydarooliga.
The tayada wax soo saarka kaamil ah, soo saaridda alaabta buure, kormeerka tayada dhaafin sababa gaariga bamka CONELE ah si ay u gaaraan hoggaamineed qoyska, heerka sare ee caalamiga ah, nidaamka gacanta oo dhan wuxuu qaadanayaa taarikada bir iyo xoog sare saxan qabow steel giringiriyey ah, xoog Yield kor 1000Mpa hubisaa xoogga sare iyo miisaanka iftiin nidaamka kaca ah. 100% oo ka mid ah gacmaha, lugaha iyo Haamaha Shiidaalka waxaa welded si loogu daweeyo stress. Weld kasta oo nidaamka kaca ah waa mid la tijaabiyey 100% aan dhaawac ama X-ray photos in la baabi'iyo wax cilado qarsoon si faahfaahsan oo aad u more raagaya. Waxaan la qorsheeyo sida taariikhda sax ah iyada oo loo marayo falanqayn element silig iyo falanqaynta jilidda firfircoon si loo hubiyo in qaabka macquul ah iyo waxqabadka fiican ee nidaamka kaca ah. Iyo natiijooyinka xisaabinta iyo falanqaynta dhismaha jib waxaa lagu xaqiijiyey xarunta imtixaanka heer-gobol imtixaanka stress-cadaadis si ay u caddeeyaan natiijooyinka waa inay waafaqsan yihiin shuruudaha shaqada ee dhabta ah.
CONELE Group ayaa had iyo jeer ku adkeystay on macaamiisha u janjeedha, iyadoo sannado badan oo cilmi-baarista iyo horumarinta, waayo-aragnimo-soo-saarka gawaarida bamka, sida ay shuruudaha macaamiisha, loogu talagalay waxyaabaha sida codsiga macaamiisha, waxaan had iyo jeer isku dayaan in ay ku siiyaan ugu haboon baahida dhismaha baabuurta bamka, sidaa darteed in macaamiisha "dooro oo keliya mid ka mid sax ah, uma baahna inay qaali ah".
waqti Post: Feb-17-2020
Iibka iibka 'Konecranes' iyo iibka ka dib ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya gawaarida matoorka ...
Celia: Waa salaaman tahay, Ku soo dhowow inaad soo booqato bartayada internetka. Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto
Celia: Waa noocee ah ayaad rabtaa?